भारत भर्सेस वेस्ट इन्डिजः धोनीबिना सिरिज जित्ला भारत? – Everest Dainik – News from Nepal
भारत भर्सेस वेस्ट इन्डिजः धोनीबिना सिरिज जित्ला भारत?
काठमाडौं, साउन ५ । वेस्ट इन्डिज विरुद्धको टि–२०, वान डे र टेस्ट सिरिजमा भारतीय टिमका पूर्व कप्तान एवं विकेटकीपर ब्याट्सम्यान महेन्द्रसिंह धोनीलाई विश्राम दिइएको छ । धोनीलाई तीन वटै फम्र्याटमा समावेश गरिएको छैन । उनीसँगै विश्वप २०१९ खेलेका विकेटकीपर ब्याट्सम्यान दिनेश कार्तिकलाई पनि टिमबाट हटाइएको छैन ।
दुवै विकेटकीपरलाई विश्राम दिएपछि तिन ओटै फम्र्याटमा ऋषभ पन्तले विकेटकीपिङको मौका पाएका छन् । यो पटक टिममा राहुल चहर, नवदीप सैनी र दीपक चहरलाई नयाँ अनुहारका रुपमा देखिने छन् । दीपक र राहुल दाजुभाई हुन् ।
हार्दिकलाई पनि आराम
वेस्ट इन्डिज विरुद्धको टि–२०, वान डे र टेस्ट सिरिजका लागि घोषणा गरिएको टिममा अलराउन्डर हार्दिक पाण्ड्याको नाम समावेश भएको छैन । भरतीय मिडियाका अनुसार उनी पिठ्यूमा देखिएको समस्याका कारण आज घोषणा गरिएको टिममा समावेश नभएका हुन् ।
ट्याग्स: भारतीय क्रिकेट टिम, महेन्द्रसिंह धोनी